N26, bhangi rako riri pane yako nhare | IPhone nhau
N26, bhangi rako riri pane yako nhare
Nyika yebhangi iri kuchinja, uye nekukurumidza zvikuru. Kana nharembozha dzichiri muchikamu chinonyanya kuwanikwa munyika medu, nekuuya kweApple Pay masvondo mashoma apfuura naBanco Santander, iko zvino kwauya zano nyowani rebhangi rinoenda kupfuura izvo zvatinoziva pachinyakare zvinonzi "online bank". N26, chinzvimbo cheGerman, inouya munyika medu ine yakasarudzika ficha: iri chete pane yako nhare. Iwe unogona kuvhura account mumaminetsi mashanu chete, usina kana kumbotumira zvinyorwa neemail, uye zvese izvi kubva kunyorera kwe iPhone yako.
N26 inotsigirwa neGerman inishuwarenzi, uye inobvumidzwa kushanda sesangano rezvemari, ndiko kuti, hapana chikonzero chekushushikana nekuti yakafanana nechero rimwe bhangi asi iine hunhu hunoita kuti ive yakasarudzika. Ehe hapana mari yekuchengetedza, iwe unenge uine MarterCard debit kadhi mahara zvachose, iyo iwe yaunogona kushandisa mune chero nyika iri pasi pasina makomisheni ekubhadhara mune yekunze mari. Iwe unogona kunyange kutora kubva kune chero MasterCard ATM isina makomisheni anosvika kashanu, mushure meizvozvo unotozofanira kubhadhara € 5 pakutengesa kumaATM.
N26 - Iyo Mobile Bhengivakasununguka
Inotumirwa nenhamba yefoni kana email pasina chero komisheni, kunyangwe mune yekune imwe nyika mari, mukana wekumisa kana kudzima kadhi rako kubva kune yako nhare yekushandisa, kana kumisikidza mashandiro kunze kwenyika, pusha zviziviso munguva chaiyo yemabasa aunoita neakaunzi yako, gadzirisa iyo kadhi miganhu yekushanda kubva kune yako nhare ... Zvese zvaunoda kubva kubhangi zviri pamaoko ako nekubata nyore pane yako nharembozha, zvechokwadi inodzivirirwa ne password uye neako TouchID. Ehe saizvozvo ine zvakare kunyorera kweApple Watch. Imwe nzira yekuzvitakura kubhangi inowanikwa kune chero munhu ane smartphone. Nenzira, ndisati ndanyepa pandakati ndezve nharembozha yako chete, unazvo zvekare https://my.number26.de
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » N26, bhangi rako riri pane yako nhare
Izvi zvatove zvakapihwa nesangano reSpanish. Inonzi ImaginBank. Hapana chinhu "chinoshamisa" nezvazvo.
Zvinoenderana neLa Caixa. N26 haina kubva kune chero chimwe chinhu
Ehe, zvinoenderana neLa Caixa. Izvo hazvireve kuti chimwe chinhu chakadai chaive chiripo muSpain. Saka "pfungwa nyowani yebhangi yasvika", uye kuti chimwe chinhu "chakasarudzika" hachisi chaizvo chaizvo ...
Iine maitiro akafanana neImaginBank kubva pane zvandinoona, pasina mubhadharo wekuchengetedza kana nekadhi, kugona kutora mari, kunyangwe isina muganho muImaginBank kumaATM eboka. Nezviziviso zvePush, kuendesa muakaunzi kana nefoni, kudzora kadhi mune chishandiso ...
Kuwedzera kwandinoverenga, zvinonyanya kutaridza senge ImaginBank irikuita kare.
Zviri pachena kuti zvinoita chero bhangi rinogona kuita. Icho chitsva ndechekuti i100% "chaiyo" bhangi, hazvitsamire kune chero "zvakajairika" bhangi, uye haina mahofisi kana chero chakadai. Mabhangi epamhepo ave achishanda kwenguva yakareba, iBanesto yaive yatovepo makore apfuura. Asi iyo yekutanga, chinoita kuti ive yakasarudzika ndeyekuti i100% saizvozvo, haisi yepasi, zvirinani zvatinoziva nezvazvo.
Asi huya, kana zvauri kureva kuti zvinoita zvinoitwa nevamwe, hongu. Kunze kwekunze mashandiro… izvo zvandisina chokwadi nazvo kune vazhinji vanozviita.
Imaginbank inokutendera kuti ubvise pasina makomisheni pane chero euro zone ATM? Aisaziva…
Ndakave neN26 kubvira payakange isati yanzi Number26, unogona kubvisa mari usina makomisheni pane chero euro zone yeATM, wozo kune dzimwe nyika dzisiri dzeyuro inotakura makomisheni kunze kwekunge wasarudza iyo Nhema maitiro ayo anosanganisira inishuwarenzi yekufamba.
Inoshanda chaizvo. Kuti uvhure account vanokumbira pasipoti yako uye vosimbise kuburikidza neApp yavo.
Iyo Appstore inokura 60% mukati megore rapfuura 2016